Fihetsika tsy nampoizina tao Prague taorian’ny fananihambohitra rosiàna tao Okraina · Global Voices teny Malagasy
Zavatra roa samihafa ny kolontsaina rosiàna sy ny fananihambohitra rosiàna
Voadika ny 27 Febroary 2022 18:40 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, Esperanto , українська, English
Fanambaràn'ny filoha tseky, Milos Zeman, momba ny toedraharaha ao Okraina taorian'ny fananihambohitra nataon'i Rosia. Pikantsary avy amin'ny fantsona youtube an'ny CNN Prima.
Somary tsy nampoizina, nanova ny fomba fijery an'i Maosko nananan'ilay nafàna fo faran'izay nahataona indrindra tao amin'ny Repoblika Tseky ny fananihambohitra nataon'i Rosia ao Okraina: ny filoha Zeman, izay vao avy nanondro ho “heloka bevava” ny fihetsika nataon'i Maosko.
Misy fifandraisana tsy dia tsara loatra eo amin'ny Repoblika Tseky sy Rosia. Raha pôlitika no resahana, misamaritaka ny governemantany: efa hatry ny ela ny filoha Miloš Zeman no naneho imasom-bahoaka ny fanohanany tsy misy fepetra an'i Maosko. Kanefa ireo fifidianana solombavambahoaka natao tamin'ny Oktôbra 2021 dia nitondra ho amina fiaraha-mitantana vaovao sy minisitra tseky vaovao misahana ny raharaha ivelany, Jan Lipavský, izay misolo tena ny Pirate Party (Antokon'ny Mpijirika).
Ampahibemaso no nankatoavan'i Lipavský ny fomba fijerin'ny sampam-pitsikilovana tseky momba an'i Rosia sy Shna, izay tsy tapaka tany anatin'ireo tatitra isantaona ho an'ny daholobe, nanondro ireo firenena roa ireo ho toy ny maneho loza mitatao goavana indrindra ho an'ny fiarovam-pirenen'ny Repoblika Tseky. Rehefa nomena azy ny lisitry ny governemanta vaovao dia nandraman'i Zeman ny nampiasa ny vatony tsy azo ivalozana tamin'ny fanendrena an'i Lipavský, tamin'ny filazàna azy ho mpankahàla rosiàna ka dia nataony nihisatra nandritra ny herinandro maro ny fanendrena azy, saingy tsy maintsy nanaiky ny fanendrena ihany nony farany.
Ny 24 Febroary io fifandrafesana efa hatry ny ela io no nirodana, andro nanamarika ny nanombohan'ny fananihambohitra nataon'i Rosia tao Okraina. Nanao fanambaràna tao anaty lahatsary iray mandiso tanteraka ny fijeriny fahiny i Zeman, izay fantatra tamin'ny fahanginany lavabe momba ireo olana mampizarazara, ary niàla tsiny noho ny hadisoana nataony no sady nanosotra ny fanapahankevitr'i Rosia ho toy ny heloka bevava:
Hoy i Zeman:
Tiako ny kolontsaina rosiàna ary omeko lanja ireo Rosiàna maty tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, saingy tsy midika akory izany hoe ho ekeko ny fananihambohitra ataona tafika vahiny iray any amina tanin'ny fanjakàna iray manana ny fiandrianam-pireneny. Nanao heloka bevava iray manohintohina ny fandriampahalemana i Rosia.
Andro vitsy lasa izay, nilaza aho tsy adala akory ny Rosiàna ka handeha hanafika an'i Okraina. Miaiky aho fa diso.
Nanao antso koa izy ny hihetsehana avy hatrany hanakanana an'i Rosia tsy hampiasa ny rafitra banky SWIFT, famaizana iray mety hisy fiantraikanty ratsy be ho an'ny toekarena rosiàna. Mitaky an'io fepetra io ihany koa ireo firenena Baltika.
Ny fiovam-penitra nahery vaika nataon'i Zeman momba an'i Rosia dia ao hazavaina amin'ny zavamisy hoe niaina toe-javatra nitovitovy tamin'io ny firenena Tsekôslôvaky tamin'ny 1938 fony i Hitler nakà ny ampahany lehibe tamin'ilay firenena izay ny foko Alemàna no be indrndra nipetraka tao, fantatra amin'ny hoe Sudetenland, teo ambanin'ny mody nilazàna fa ho fiarovana azy ireo. Manakoako lalina any amin'ireo vahoaka Tseky ny fampilaharana azy io amin'ny kabary nataon'i Putin tamin'ny 21 Febroary, izay mahatsiaro ny tsy fahombiazan'ny andraikitra ara-miaramila tokony ho nataon'i Frantsa sy ny Fanjakana Mitambatra (UK) sy nihevitra fa afaka ny hampitonitony an'i Hitler nandritra ilay Kaonferansa tao Munich. Nasehon'ny Ady Lehibe Faharoa hoe hatraiza no diso sy nitarika fahafatesana io tombatombana io.
Manaraka ny dian'ny fiovàm-pon'i Zeman, nandray fepetra malaky ny governemanta tamin'ny 24 Febroary hanafay an'i Rosia, tamin'ny fanambaràna ny mety hanakatonany ny kaonsily rosiàna, ary hanakatona ireo kaonsiliny roa any Rosia. Io dia nanampy trotraka ny krizy lalina ara-diplaomatika izay, tamin'ny 24 Aprily, nitarika ho any amin'ny fandroahana diplaomaty Rosiàna niisa 18 sy fanenàna be ny isan'ny olon'ny masoivoho rosiana tao Prague, taorian'ireo fiampangàna asa fampihorohoroana teo amin'ny tanin'ny firenena Tseky tamin'ny 2014. Heverin'ny governemanta ihany koa ny handràra ny fanomezana vizà ho an'ireo Rosiàna mpivahiny, afa-tsy ireo Rosiàna mpikatroka mitady fialokalofàna.
Araka izay hita amin'ity bitsika ity, ny ben'ny tanàna ao Prague, Zdeněk Hřib, avy amin'ny antoko Pirate Party ary tena mpanakiana mivaivay an'i Rosia sy Shina, dia nanjohy ny fihetsiketsehana iray goavana tao amin'ny Kianjan'i Wenceslas ao Prague, izay nahitàna Tseky an'arivony maro naneho ny fanohanan'izy ireo an'i Okraina:
Prague mijoro miaraka amin'i Okraina.
Nizara sary avy amin'ilay fihetsiketsehana ihany koa ny masoivoho okrainiàna ao Prague: